Izinhlobo zamathuluzi wokumba umhlaba
Ukusebenza emhlabathini akulula, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukukhetha imishini elula kakhulu engakwazi ukwenza kuphela inani elidingekayo lomsebenzi, kodwa futhi likwazi ukwenza lula ukusebenza kwalo. Hlanganisa nezimbobo ze-oval A spade enezimbobo iyithuluzi elisebenzayo kokubili engadini nasezindaweni zasadini. Leli thuluzi lisetshenziselwa ukumba izilimo eziyizigaxa nokumba umhlaba, ukukhipha izingxenye zomhlabathi ngamunye.
Iyini inhlabathi ekhuni: indlela yokuhlakulela umhlaba
Ukukhwabanisa kubhekwa njengendlela enkulu kakhulu, ephumelelayo, ekhiqizayo, efinyeleleka yonke indawo futhi ebiza imali yokutshala izitshalo. Ukuze uhlele umhlaba wakho ngokucophelela nangendlela efanele, zijwayele ukuzitholela ngama-nuances wenqubo. Kuyini?